Business Barometer: Navoaka ny fanadihadiana nataon'ny CEO an'ny Trinidad & Tobago
Home » Ny olona ao amin'ny Travel & fizahan-tany » Business Barometer: Navoaka ny fanadihadiana nataon'ny CEO an'ny Trinidad & Tobago
Ny T&T dia hiatrika ny taona fahatelo nisesy tamin'ny fitomboana nifanarahana tamin'ny taona 2017 ary nijanona ho mifangaro ny vinavinan'ny mpamaky, nanatsara ny fahatsapan'ny orinasa teo amin'ireo mpitantana C-suite nitafa.
Ny fanontana farany an'ny Business Barometer: Survey an'ny CEO an'ny Trinidad & Tobago nataon'ny orinasam-pikarohana sy consultant manerantany Oxford Business Group (OBG) dia manondro ireo famantarana ny mety hisian'ny fanarenana ara-toekarena sy ny fomba fijery mazava kokoa, ao ambadiky ny asa mihabe manerana ny sehatry ny angovo.
Ao anatin'ny fanadihadihana farany nataony, ny OBG dia nanontany amina tompon'andraikitra ambony am-polony avy amin'ny lafivalon'ny firenena ny andianà fanontaniana misimisy ifanaovana kendrena mba handrefesana ny fahatsapan'ny orinasa.
Avy amin'ireo mpitarika ny orinasa nohadihadiana dia 60.7% no nilaza fa mety hanao fampiasam-bola amin'ny 12 volana ho avy izy ireo, raha oharina amin'ny 44% tamin'ny Novambra 2016. Ho valin'ny fanontaniana iray hafa dia 57.1% amin'ireo namaly no nilaza fa nahatsapa ho tsara toe-javatra eo an-toerana orinasa, avo kokoa noho ny 18% notaterina tamin'ny taon-dasa.
Raha nanontaniana momba ny tontolon'ny hetra misy ny T&T (asa aman-draharaha sy manokana), ny ankamaroan'ny olona (67.8%) dia nanamarika azy ho mpifaninana na mpifaninana amin'ny sehatra manerantany.
Na izany aza, nanambara ny ahiahiny momba ireo toetra lehibe tsy hita ao amin'ny toeram-piasana ireo mpitarika ny orinasa, miaraka amin'ny 50% sy 32.1% mitanisa ny fahaiza-mitarika sy ny serivisy ho an'ny mpanjifa ho an'ireo izay be fangatahana indrindra.
Maneho hevitra momba ny valiny, Jaime Pérez-Seoane de Zunzunegui, tonian-dahatsoratry ny faritra avaratry Afrika Avaratra sy The America, dia nilaza fa na dia hiatrika taona fahatelo misimisy aza ny T&T amin'ny fitomboana nifanekena tamin'ny taona 2017 ary mbola nifangaro ihany ny vinavinan'ny varotra, nihatsara ireo mpitantana resadresaka nitafa.
"Ny fampiroboroboana ny sehatry ny angovo entin'ny tetik'asa vaovao miakatra, miaraka amin'ny fiakaran'ny asa fikarohana, dia mety hanondro ireo fambara fanarenana izay mety hiparitaka amin'ireo sehatra hafa amin'ny toekarena," hoy izy.
Pérez-Seoane dia nanamarika fa ny FMI dia nanombatombana ny fitomboan'ny harinkarena faobe 1.9% ho an'ny T&T amin'ny taona ho avy ao amin'ny World Economic Outlook farany.
"Zava-dehibe, ny sehatra tsy miankina dia toa vonona handray andraikitra amin'ny fikatsahana ny fanovana ilaina amin'ny paradigma ara-toekarena," hoy izy. "Ny fandraisana andraikitra vao haingana avy amin'ny sehatra ho an'ny daholobe, izay mitady hanamorana ny famokarana sy ny fanondranana dia tokony handeha amin'ny lafiny iray amin'ny fanampiana amin'izany. Amin'ny ankapobeny, ny valiny dia mampiseho onjam-panantenam-baovao, miaraka amin'ny fahavononam-bola hampiasa vola sy hiasa ho amin'ny fanarenana ara-toekarena. "
Fraport dia nandefa fahombiazan'ny orinasa matanjaka sy fitomboana lehibe
Ny karatra Tiorka dia mahazo hatrany ny fankatoavana QEP